Kenya oo aan weli ka raja dhigin in xal diblumaasiyadeed lagu dhammeeyo muranka badda ee kala dhaxeeyo Soomaaliya - BBC Somali
Kenya oo aan weli ka raja dhigin in xal diblumaasiyadeed lagu dhammeeyo muranka badda ee kala dhaxeeyo Soomaaliya
15 Oktoobar 2015
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Kenya, Aamina Maxamed, ayaa waxa ay BBCda u sheegtay in Kenya ay weli rajaynayso, in muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya, lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii July muranka badda u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda.
Meesha la isku haysto waxa ay gaarsiisan tahay in ka badan 100,000 oo kilometre oo isku wareeg ah oo ku yaal badweynta Hindiya, waxaana la rumeysan yahay in uu ku jiro meeshaasi kayd shidaal oo muhiim ah.
Kenya ayaa waxa ay ku doodaysaa in xuduudeeda badda ay tahay in si toos ah looga soo cabiro dhanka bariga, halka Soomaaliyana ay ku dhegan tahay in xuduudda ay ku teedsanaato Koonfur Bari oo ah halka uu ku eg yahay xariiq xuduudeedka bariga.
Danjire Aamina ayaa waxa ay u warrantay weriyaha BBCda Anne Soy.
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya, Aamina Maxamed, oo u warrantay weriyaha BBCda Anne Soy.